Nutrition – Page 15 – Healthy Life Journal
၀ါတွင်းကာလ သက်သတ်လွတ် စားမည့်သူများ အာဟာရ ပြည့်ဝစေရန်
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဝါတွင်းကာလ သက်သတ်လွတ်စားမယ်ဆိုရင် အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝနေအောင် အဓိကအနေနဲ့ ပဲအမျိုးမျိုး၊ တိုဟူး၊ အာလူး၊ အရွက် မျိုးစုံစားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အသားမစားလည်း ပရိုတင်းဓာတ် ရရှိပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်စားသူတွေထဲမှာ အသက် ၂၅ နှစ်အောက်ဆိုရင် ကြွက်သားသန်စွမ်းဖို့အတွက် အသားစားဖို့...
အရက်စွဲသူများတွင် ချို့တဲ့တတ်သည့် အာဟာရ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် ၊ (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ မေး။ ။ အရက်စွဲသူတွေက ဘယ်လို အာဟာရဓာတ်တွေ ချို့တဲ့တတ်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ။ ။ အရက်စွဲတဲ့ သူတွေမှာ အဓိက ချို့တဲ့တတ်တဲ့ ဗီတာမင်က ဗီတာမင် B1 ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့...
ရင်သားကင်ဆာမျိုးရိုး ရှိသူများအတွက် အာဟာရ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ မေး. ရင်သားကင်ဆာမျိုးရိုးရှိသူ ရင်သားကင်ဆာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို အဓိကရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသလဲ။ ဖြေ. ရင်သားကင်ဆာမျိုးရိုးရှိသူတွေအနေနဲ့ အဆီတွေက ရင်သားကင်ဆာကို အားပေးပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာက အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းများတာနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကြောင့် အဆီများများစားတဲ့သူ၊ ဝက်သားတုတ်ထိုးများများ စားတဲ့သူ၊ ဟင်းအနှစ်များများစားတဲ့သူ . ....
ကိုယ်ဝန်ရရှိစေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် အစာများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်ဝန်ရရှိအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ သင့်အတွက် သင်စားနေကျ အစားအသောက်တွေက သင်ရဲ့မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး မြန်မြန်ကိုယ်ဝန်ရရှိစေပါတယ်။ (၁) ကြက်ရိုးစွပ်ပြုတ် ကြက်ရိုးစွပ်ပြုတ်ဟာ သင့်ကိုမြန်မြန် ကိုယ်ဝန်ရရှိအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ကြက်ရိုးစွပ်ပြုတ်ထဲ ရှလကာရည်အနည်းငယ် ထည့်သောက်ရင် ကြက်ရိုးထဲက...
ကိုအင်ဇိုင်း ကျူ-၁၀ (CoQ10) ပါဝင်မှု အများဆုံး အစာများနှင့် ကောင်းကျိုး
စူး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) ကိုအင်ဇိုင်း ကျူ-၁၀က အင်ဇိုင်း၊ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်နဲ့ ဗီတာမင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ သဘာဝအတိုင်း ထုတ်လုပ်ပြီး အသည်း၊ နှလုံး၊ ပန်ကရိယနဲ့ ကျောက်ကပ်တွေထဲမှာ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုအင်ဇိုင်း ကျူ-၁၀က စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်တာကနေ ဆဲလ်တွေကို...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ ဘယ်လို စားသောက်ရင် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေ ဖြစ်နှုန်း လျော့နည်းနိုင်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ။ ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက် (Healthy Diet) စားရင် နှလုံးရောဂါ...
ပန်းသီး စားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အောက်ပါ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေပါတယ်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအန္တရာယ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ သွေးတွင်း မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောအဆင့်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ သည်းခြေကျောက်တည်တာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါကို သက်သာစေပြီး...
သက်ရှည်ကျန်းမာဖို့ ဘာစားသင့်သလဲ . . .
– ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ . . . ခရမ်းချဉ်သီး စားပါ။ – ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါအန္တရာယ် လျော့ကျစေဖို့ ရွှေဖရုံသီး စားပါ။ – နမိုးနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါ သက်သာစေဖို့ လိမ္မော်သီး စားပါ။ – အသားဝါဖြစ်တာ သက်သာစေဖို့ ....
သြဇာသီး၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ
သြဇာသီးစားပေးရင် အောက်ပါ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ – သြဇာသီးမှာ ဗီတာမင်စီ များများပါဝင်မှုရှိပါတယ်။ – သြဇာသီးမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ပါဝင်မှု များပါတယ်။ – သြဇာသီးစားပေးရင် ရောဂါဝေဒနာများစွာကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ – သြဇာသီးမှာ ဗီတာမင်အေ ကောင်းစွာ...
၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် ၊ (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ – ပရိုတင်း အသည်းခြောက်သူမှာရေဖျဉ်းစွဲနေပြီး ရေဖျဉ်းထုတ်ရတယ်ဆိုရင် ပရိုတင်းတွေအားလုံးက ပါသွားတဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်မှာ ပရိုတင်းဓာတ် များများပါတဲ့ အစာ (High Protein Diet)ကို စားရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ အနီရောင် အသားကို...